Ahoana ny fametrahana mari-drano amin'ny sary amin'ny alàlan'ny telefaona sy PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ny fametrahana mari-drano amin'ny sary dia fomba iray hampifandraisana ny anaranao na ny orinasa misy sary. Amin'izao fotoana izao, misy programa sy rindranasa marobe izay mamela anao hampiditra ny sary famantarana anao, na amin'ny telefaona anao na amin'ny PC-nao, amin'ny dingana vitsivitsy. Jereo fa tsotra be izany.
Raha te hampiditra ny mari-drano amin'ny sary amin'ny findainao dia andao hampiasa ny fampiharana PicsArt. Ho fanampin'ny fahalalahana dia mamela anao hampiasa sary sy lahatsoratra amin'ny fomba manokana. Noho izany, alohan'ny hanarahana ny dingana tsirairay dia ilaina ny misintona ilay rindranasa amin'ny fitaovana Android na iPhone anao.
1. Sokafy PicsArt ary mamorona kaonty na midira amin'ny angona mpampiasa Gmail na Facebook-nao;
Raha sendra mahita tolo-kevitra hisoratra anarana amin'ny fampiharana ianao dia kitiho ny X, matetika hita eo an-tampon'ny efijery hanidy ny dokam-barotra. Ny safidy hampiditra mari-drano dia misy eo anelanelan'ny loharano maimaim-poana amin'ny serivisy.
2. Eo amin'ny efijery an-trano, kitiho ny + manomboka;
3. Kitiho ny sary tianao ampidirina ny mari-drano hisafidianana azy. Raha tsy hitanao io dia mandehana Ny sary rehetra hijerena ny sary rehetra misy amin'ny fitaovanao;
4. Sintomy eo ambanin'ny sary ilay bara mba hahitana ny fiasa rehetra. Nikitika aho lahatsoratra;
5. Avy eo soraty ny anaranao na ny an'ny orinasanao. Kitiho ny kisary fanamarinana (✔) rehefa vita;
6. Alohan'ny hanombohanao manitsy, apetraho amin'ny toerana irina ny lahatsoratra. Mba hanaovana izany, kitiho ary tariho ny boaty lahatsoratra.
Azo atao koa ny mampitombo na mampihena ny boaty lahatsoratra ary, vokatr'izany, ny litera, amin'ny alàlan'ny fikasihana sy fitarihana ireo faribolana hita eo amin'ny sisiny;
7. Ankehitriny, tsy maintsy ampiasainao ny fitaovana fanovana lahatsoratra handao ilay mari-drano araka izay itiavanao azy. Ireto misy loharanom-pahalalana manaraka:
Fuente: Manolotra karazana litera samihafa. Rehefa mikitika na inona na inona ianao dia ampiharina amin'ny lahatsoratra natsofoka tao amin'ilay sary;
loko: Araka ny dikan'ny anarany dia mamela anao hanova ny lokon'ny litera izy. Hamarino fa tsy ho ela dia mbola misy safidy hampidirina gradient sy firafitra;
Edge: ahafahanao mampiditra sisin-tany amin'ny litera ary misafidy ny hateviny (ao amin'ny bara habetsahana);
opaqueness: manova ny mangarahara amin'ny lahatsoratra. Ity dia singa iray manan-danja ka ampidirina amin'ny fomba misimisy ilay mari-drano, tsy manelingelina ny fahitana ny sary;
Sombra: fiasa hampidirana alokaloka litera. Izy io dia mamela ny hisafidy loko ho an'ny alokaloka, ary koa hanitsy ny hamafiny sy ny toerany;
tsara: mampiditra curvature amin'ny teny na andianteny, araky ny zoro voafaritra ao amin'ny bara Mamoritra. Miankina amin'ny karazana orinasa azonao atao, azonao atao ny manome ny marikao milamina.
8. Aorian'ny fanovana, mandehana mankany amin'ny kisary fanamarinana (✔) eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny efijery;
9. Raha tehirizina ny valiny, kitiho ny kisary zana-tsipìka eo amin'ny zoro ambony ambony;
10. Amin'ny efijery manaraka, mankanesa any afa-tsy ary avy eo ao Tehirizo amin'ny fitaovanao. Ny sary dia ho voatahiry ao amin'ny Gallery na Library of smartphone.
Ampidiro toy ny mari-drano
PicsArt dia mamela anao koa hampiditra ny kisary ataon'ny orinasa fa tsy manoratra fotsiny ny anaranao. Mba hanaovana an'io dia mila manana ny sary logo anao amin'ny JPG ao amin'ny Gallery o Biblioteca finday.
Araho fotsiny ny dingana 1 ka hatramin'ny 3, voalaza etsy ambony. Avy eo, eo amin'ny fitoeram-pitaovana fitaovana, tap A. Sary. Safidio ny rakitra tianao ary manamafisa ao hametraka.
Toy ny amin'ny lahatsoratra, azonao atao ny manitsy ny toerana sy ny refin'ny sary natsofoka tamin'ny alàlan'ny fikasihana sy fitarihana. Mba hamerenana ny habeny raha mitazona ny refy ianao dia manoro hevitra anao ny hisafidiananao ny kisary zana-tsipika misy loha roa.
Nametraka ny sary famantarana, mandehana amin'ny safidy opaqueness, azo jerena eo ambanin'ny efijery. Ahenao ho mangarahara mba tsy hanelingelina ny sary lehibe, fa mbola hita ihany. Fenoy ny fizotrany miaraka amin'ilay sary famantarana fanamarinana (✔) eo an-tampon'ny efijery ankavanana.
Raha tehirizina ny valiny, kitiho ny kisary zana-tsipìka eo amin'ny zoro havanana ambony ary amin'ny efijery manaraka dia mandehana afa-tsy. Hamafiso ny fanapaha-kevitra ao Tehirizo amin'ny fitaovanao.
Ao amin'ny lesona manaraka dia hampiasa ny tranokala iLoveIMG izahay. Ny serivisy dia ahafahanao mampiditra mari-drano amin'ny sary sy ny soratra, ankoatry ny fanaingoana ny habe sy ny opacity. Ny mpampiasa koa dia afaka mametaka sary marobe amin'ny fotoana iray mora.
1. Sokafy ny navigateur safidinao ary ampidiro ilay fitaovana watermark iLoveIMG;
2. Tsindrio ny bokotra Misafidiana sary ary safidio ny sary tianao hampidirina ny mari-drano amin'ny solosainao;
3. Ny fomba fampidirana ireo mari-drano amin'ny sary sy lahatsoratra dia mitovy amin'izany:
A) Amin'ny sary: raha te hampiditra sary toa ny logo an'ny orinasanao ianao dia kitiho Ampio ny sary. Safidio avy eo amin'ny PC ny sary.
FAHAROA) Ao amin'ny lahatsoratra: tsindrio eo Manampia lahatsoratra. Soraty ny lahatsoratra irina, toy ny anaranao na ny marikao. Azonao atao ny manamboatra ireto lafiny tononkira manaraka ireto:
Fuente- Ny fikitihana an'i Arial dia mampiseho ireo safidy hafa;
Talla: misy amin'ny kisary misy litera roa T (Tt);
fomba: endritsoratra sahisahy (faharoa), italiana (yo) ary tsipika (U);
Loko eo ambadika: fipihana eo amin'ny sary famantarana ny siny loko;
Loko taratasy sy ny sisa: misy amin'ny fipihana ny kisary litera UN
fandrafetana: ao amin'ilay kisary noforonin'ny tsipika telo, azo atao ny manasongadina na manamarina ilay lahatsoratra.
4. Avy eo apetraho amin'ny toerana irina ny sary na boaty lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fisarihana. Raha te hanova ny habeny dia tsindrio fotsiny ireo boribory eo amin'ny sisiny ary sintomy;
5. Mba hanitsiana ny opacity, kitiho ny kisary toradroa misy efamira ao anatiny. Hiseho ny bara iray ahafahanao mampitombo na mampihena ny haavon'ny mangarahara;
6. Raha te hampiditra ilay mari-drano mitovy amin'ny sary hafa ianao dia kitiho ny +, eo amin'ny ilany ankavanan'ny sary. Safidio avy eo amin'ny sary PC ireo sary hafa;
Azonao atao ny manindry ny tsirairay raha te hahita ny endrik'ilay fampiharana ary ahitsy tsirairay, raha ilaina izany.
7. Tsindrio ny bokotra Sary mari-drano;
8. Sintomy ny rakitra ao amin'ny Sintomy ny sary misy mari-drano. Raha nampiditra ny mari-drano tamin'ny sary marobe niaraka tamin'izay ianao, dia halefa ao anaty rakitra amin'ny endrika .zip izy ireo.
Tsy misy PC
Raha te hiasa ivelan'ny Internet ianao ary tsy te handoa fangatahana fanovana dia azonao atao ny mampiasa Paint 3D. Ny programa dia zanaky ny Windows 10. Raha manana an'ity kinovan'ny rafitra apetraka amin'ny solosainao ity ianao dia mety manana ilay rindrambaiko koa.
Tsy toy ny safidy teo aloha, tsy azo atao ny manova ny opacity. Ka raha mila valiny misimisy kokoa ianao dia mety tsara kokoa ny mampiasa ny sasany amin'ireo vahaolana aseho etsy ambony.
2. tsindrio eo sakafo;
3. Avy eo dia mandehana Mampidira ary safidio ny sary tianao hametrahana ny mari-drano;
4. Miaraka amin'ny sary misokatra ao amin'ilay programa, kitiho lahatsoratra;
5. Tsindrio ny sary ary ampidiro ny tsoratry ny watermark. Ao amin'ny zoro ankavanan'ny efijery dia ho hitanao ny safidy azo atao amin'ny fiasan'ny lahatsoratra. Raha hampihatra azy ireo dia safidio ny totozy aloha.
Lahatsoratra 3D na 2D- Hisy ny tsy fitovizany raha toa ka hampiasa ny fiasa 3D View na Mixed Reality ianao;
Karazan-tsoratra, habe ary loko;
Fomba fanoratana: sahisahy (N), italiana (yo) ary tsipika (S)
Fenoy ny background- Raha tianao hanana loko miloko ny lahatsoratra. Amin'ity tranga ity dia mila misafidy alokaloka tianao ao anaty boaty eo akaikiny ianao.
6. Raha hametraka ny lahatsoratra tianao, tsindrio ary sintomy ilay boaty. Raha te hanova ny haben'ny boaty dia tsindrio ary sintomy ireo efamira hita eo amin'ny sisin-tany;
7. Rehefa tsindrio eo ivelan'ny boaty misy ny lahatsoratra na tsindrio ny bokotra Enter, dia miorina amin'ny toerana nampidirina azy ny lahatsoratra ary tsy azo ovaina intsony;
8. Ho famaranana dia araho ny lalana: Menu → Tehirizo toy ny → Sary. Safidio ny endrika tianao hitehirizana ary farano afa-tsy.
Raha te hampiasa ny sary famantarana ny orinasanao ianao dia ataovy fotsiny ny dingana 1, 2 ary 3 ary avereno avy eo, fa amin'ity indray mitoraka ity, manokatra ny sary logo. Avy eo ataovy tsotra ny fanitsiana voalaza ao amin'ny Dingana 6 ary mitahiry, araka ny voalaza ao Dingana 8.
Fomba fanamboarana lohanteny amin'ny Word
Mpanonta horonantsary maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny fitaovana finday
'Photoshop' an-tserasera: Alternatives editor sary maimaim-poana tsara indrindra